गुगल नक्शा अब KML समर्थन संग Martech Zone
बिहीबार, डिसेम्बर 7, 2006 बिहीबार, जुन 12, 2014 Douglas Karr
यस्तै समयमा, मलाई थाहा छ कि म एक geek हुँ! आज गुगल कोड ब्लग भर्खरै घोषणा गरियो कि उनीहरू अब KML फाईलहरू समर्थन गर्दैछन्।
"डग, शान्त", तपाईं भन्नुहोस्!
म सक्दिन! म freakin 'बाहिर छु! जहाँ तपाई नक्शामा प्रोग्रामिंग प्वाइन्ट प्वाइन्ट गर्नु पर्ने थियो, अब तपाई केवल KML फाईलमा 'पोइन्ट' गर्न सक्नुहुनेछ र गुगल नक्शाले स्वचालित रूपमा तिनीहरूको नक्सामा प्लट गर्नेछ।
"हो, निश्चित", तपाईं भन्नुहोस्!
यहाँ KML फाईलको उदाहरण छ:
डग के तपाईंलाई थाहा छ उनीहरूले यहाँ भर्खर औ बोन पेन खोलेका थिए?
Google नक्सा प्रयोग गरेर, म केवल KML फाइल क्वेरी गर्न म नक्शालाई इशारा गर्दछु।
"वाह", तपाई अन्तमा भन्नु हुन्छ! (म आशा गर्छु!)
यहाँ के यो देखिन्छ जस्तो छ:
गम्भीरतासाथ मानिसहरू जहाँ XML सार्वभौमिक डाटा एक्सचेन्ज ढाँचा हो, KML (जुन is XML) सार्वभौमिक भौगोलिक डाटा विनिमय प्रारूप हो। यो एक महान कदम अगाडी छ। अन्य GIS प्रोग्रामहरू प्रयोग गरेर, मानिसहरूले KML फाईलहरू आउटपुट गर्न सक्दछन् र त्यसपछि तिनीहरूलाई Google नक्साको साथ अनलाइन मात्र खोल्न सक्छन्।
टैग: गुगल साइटम्यापGoogle +KMLकिमीएल फाइलSitemapsitemap.xml
डिसे 7, 2006 मा 1: 37 AM
तपाईले यसलाई राम्रो बनाउनुहुन्छ... केएमएल फाइल कसरी बनाउने भन्ने दिशामा मलाई संकेत गर्नुहोस् र म पूर्ण रूपमा सहमत हुन सक्छु...
डिसे 7, 2006 मा 11: 08 AM
राम्रो बिन्दु! म निर्देशनहरू सहित पोस्ट अपडेट गर्नेछु, मैले पोस्ट गरेको KML फाइल खोल्नुहोस् र तपाईंले संरचना देख्नुहुनेछ। KML फाइल कच्चा पाठ हो। त्यहाँ KMZ फाइलहरू पनि छन्। ती KML फाइलहरू हुन् जुन छिटो स्थानान्तरणको लागि जिप गरिएको छ (यदि तपाईंसँग ठूलो फाइल छ भने)।
7 डिसेम्बर, 2006 बेलुका 2:50 बजे
त्यो एकदम राम्रो छ! तिनीहरूले अब के सोच्ने छन्?
7 डिसेम्बर, 2006 बेलुका 4:19 बजे
एउटा नोट मैले उल्लेख गर्न बिर्सेको छु कि KML फाइल गुगल अर्थको साथ पनि तयार वा खोल्न सकिन्छ, नि:शुल्क GIS डेस्कटप अनुप्रयोग! तपाईं यहाँ नवीनतम बीटा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ:
अश्विन भ्यान ब्राम
मार्स 2, 2007 मा 3: 29 एएम
केएमएल फाइल किन संवेदनशील छ भनेर सोच्दै। यदि तपाईले XML फाइल ट्यागहरू बनाउनुहुन्छ जसमा सानो केस सुरु हुने अक्षरहरू छन्। XML/KML ले काम गर्दैन। (मलाई यस्तै भयो :D)
मार्स 2, 2007 मा 8: 37 एएम
मैले यो पनि याद गरेको छु। यो geotag को साथ समान छ। मलाई थाहा छैन किन तिनीहरूले वास्तवमा मानकमा ठूला अक्षरहरू लगाउनेछन्। मैले सँधै सोचेको छु कि यो सानो अक्षरको लागि सुरक्षित थियो (माथिको भन्दा), तर यी मध्ये केही सेवाहरू साँच्चै फिक्की छन्।
मार्स 9, 2007 मा 10: 39 एएम
मैले यो काम गर्ने तरिका फेला पारेको छु।
मैले एउटा सानो फ्रीवेयर प्रोग्राम (xt.exe) फेला पारेको छु जसले XSL फाइलसँग काम गर्दछ जसले काम नगर्ने XML लाई काम गर्ने KML फाइलमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
XSL फाइलमा (एक स्टाइलसिट) एक xml को आधार प्रदान गर्दछ। म अपरकेस ट्यागहरूसँग लोअरकेस ट्यागहरू रूपान्तरण गर्न सक्छु। काम गर्ने xml-फाइल (xml देखि kml) मा पुन: नामाकरण कार्यको साथ तपाईले काम गर्ने kml फाइल प्राप्त गर्नुहुन्छ 🙂
मई 12, 2007 मा 1: 38 एएम
यदि कुनै कारणले तपाईंले यो देख्नुभएन भने, नयाँ google mymaps thingy ले तपाईंलाई नक्सा निर्माण गर्न र kml फाइल निर्यात गर्न दिन्छ।
र गुगल एपीआईले तपाइँलाई होस्ट गरिएको kml फाइलबाट बनाइएको तपाइँको साइटमा नक्सा सिर्जना गर्न दिनुहोस् ... यो सबै सजिलो हुन्छ।